निको भएका २५,१०,१३८
निको भएको १८७
अपडेटः 2020-05-28 14:51:55 बजे ।
अमेरिकी लाइफस्टाइल: कफी छैन, केही छैन !
नेपालमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आम मानिसलाई हरेक दिन नुन-तेल/भुटुनकै चिन्ता हुन्छ। कसरी बिहान बेलुका त्यसको जोहो गर्ने? तर, अमेरिकामा भने ब्यक्तिलाई सुत्नुअघि अनि भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै पिउँने कफीलाई तिर्ने डलर खल्तीमा छ कि छैन भन्ने चिन्ता हुँदोरहेछ।
चहर्‍याइरहेको एउटा आलो घाउ
साउनको महिना सकिएर भदौ सुरू हुँदै थियो। छिनछिनमै परिवर्तन हुने मौसममा कतिबेला घाम लाग्ने र कतिबेला पानी पर्ने भइरहेको थियो। त्यसैले गिडिखोलाका मान्छेहरू प्राय घरमै हुन्थे। देशमा संकटकाल लागेकाले लामो यात्रा गर्न धेरै कुरा पूरा गर्नु पर्थ्यो। खेतबारीको
मुलुकले नचिनेको इपिएस श्रमिक, विद्यार्थी र दक्षता
दक्षिण कोरिया एक सपनाको देश।सपना देखाउँने देश।सपना साकार पार्ने देश।यसै देशमा धेरै युवा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील समय बिताइरहेको छन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएको म र मजस्तै धेरै नेपाली युवाका लागि गतिलो गन्तव्य बनेको छ- कोरिया। अझ अल्लारे जवानसामु
नेपाली राष्ट्रियता र यसका चुनौति
राष्ट्रियता भनेको व्यक्तिको आस्था एवं भावना हो जसको माध्यमबाट उसले आफूलाई आफ्नो राष्ट्रसँग गाँसेर हेर्छ, राष्ट्रप्रति स्नेह र लगाव प्रस्तुत गर्छ र आफूले पहिचान पाएको अनुभूति गर्दै आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गर्छ।अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो एक प्रकारको आस्था र विश्वासको बन्धन हो जसले ब्यक्तिल
नओभाएका आँखाहरू अनि प्रचण्ड र अमेरिका
जनयुद्वका नाममा चलेको हिंसात्मक द्वन्द्व रोकिएको पनि दुई दशक नाघेछ। तर, द्वन्द्वको असर यत्रतत्र छरिएको छ। हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका जनयुद्वकै नाइके पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति सामाजिक सञ्जालमा खनिएको आक्रोश पनि त्यही द्वन्द्वको अवशेष हो। यो त्यही द्वन
महोदय, तपाईंलाई कति वटा देश र नागरिकता चाहिन्छ?
नेपालको संसदमा एक जना नेपालीलाई दुई खालका नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट बहस सुरू भएको छ। संघीय संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा पुगेको यो विषय निर्क्यौल हुन बाँकि नै छ। तर, यति नै बेला संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीमाझ यो मुद्दाले प्रवेश पाएको छ। र, सामाजिक सञ्जालको तहमा यसको क्रि
अमेरिकामा ‘नेपाली मूलका’ को राजनीतिक भविष्य
अमेरिका विश्वभरका आप्रवासीहरुको लागि अवसरको भूमि हो। त्यसैले वार्षिक लाखौं मानिसहरु यो अवसरको भूमिमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्छन्। कैंयन मानिसहरुको सपनाले यो विशाल भूमिमा साकार रूप ग्रहण गर्न सफल भएको हुन्छ भने कतिपयका जीवनका पलहरु समुद्रको छालसँगै ब्य
वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्ससँगै पारिवारिक विखण्डन पनि भित्र्यायो
उमेरले बीस वर्षमा पाईला टेक्दै गर्दा सुड्केसभरी अलिकति खुसी र अलिकति मिठा सपना प्याक गरेर जहाज चढी आकाशको बाटोहुँदै 'युएई'को राजधानी (आवुधावी) अवतरण गरेको आठ वर्ष पुरा भएछ। सुरूका दिनमा दुई वर्षको भिसा दुई दशक जस्तो लाग्ने मलाई आफ्नो जीवनको आठ वर्ष खा
सम्भोग भर्सेस बलात्कार
घरको कामलाई प्रमुख मान्ने आमाको आजभोलि सदरमुकाम आउजाउ खुब चलेको छ। यसपालीको असार/साउनको रोपाईँ र कात्तिक/मंसिरको डल्ला फोराईमा उहाँ गएल हुनुभयो। खेतबारीसँग भेटघाट नभएको पनि महिनौं पुगिसकेको छ। आमाको अनुपस्थिति जंगलका चरामुसा अनि गाउँलेका गाई बाख्रालाई
राजा महेन्द्रले कालापानीको विषयमा चीनसँग गरेको सम्झौता यस्तो थियो
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ (भिडियोसहित)
क्राेएसियाले फेरिदिएकाे एक नेपालीकाे सपना, त्यहीमाथि थपियाे काेराेना
विगतको स्मरण र आत्मसमीक्षा गर्ने दिन
कोरोनाबाट तंग्रियो भुल्के, थलियो कचनकवल
‘भिटामिन सी खाएर कोरोना जितेँ तर छिमेकी टाढिएर हैरान छौँ’
कसैकाे ध्यान नपुगेकी ती १७ वर्षे किशोरीको मनस्थिति
सामान्य १० तरिका, निरोगी जीवनका लागि